Daadinta Samsung Galaxy Watch 3: is dhex galka iyo muuqaalada | Androidsis
Smartwatch-ka soo socda ee soo saaraha Kuuriya ayaa ku dhow geeska. Waxaa la filayaa in Samsung Galaxy 3 Watch si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa Samsung Galaxy Note 20 bisha Ogosto 5. Waxyarna waan usoconaynaa inaan ka ogaanno faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan dharkan xiran ee muddada dheer la sugayay.
Hore ayaan kaaga soo sheegnay qaabeynta taasi waxay yeelan doontaa saacaddan casriga ah, oo suuqa ku dhacaysa si ay u noqoto beddel ka Apple Watch ah. Hadda waxaan ogaanay kan Samsung Galaxy Watch 3 interface, marka lagu daro astaamaheeda farsamo.
Isbedelo yar ayaa ku yimid Samsung Galaxy Watch 3
Iyada oo loo marayo sawirro kala duwan oo la dusiyay, waxaan ku xaqiijin karnaa waxa isdhexgalka Tizen ee Samsung Galaxy Watch 3 cusub ee uu adeegsan doono noqon doono. Wixii aan ka arki karno, waxay u egtahay muuqaal aad u weyn noocyadii hore, markaa ma heli doonno waxyaabo badan oo cusub.
Dabcan, waxaan kuheli doonnaa farahayaga xaraarad wareega ah oo noo oggolaan doonta inaan ku helno howlaha kala duwan ee qalabka qaab aad u raaxo badan. Oo maxaa ku saabsan astaamaha farsamada ee Samsung Galaxy Watch 3? Hagaag, waxaan heli doonaa laba nooc.
Sidan oo kale, waxaan leenahay qaabkii ugu horreeyay oo leh garaac 41 mm, iyo sidoo kale mid labaad, nooc weyn oo ku faano diilim ah 45 mm. Heer farsamo, iyo sida aad u aragto, labaduba waxay leeyihiin muuqaal aad u weyn.
Haa, shaashadda tusaalaha yar ayaa noqon doonta 1.2 inji, halka nooca 45mm uu ka muuqan doono guddi 1.4-inji ah. Labadaba leh difaac Muraayadda Gorilla Labada xaaladoodba waxaan lahaan doonnaa 8 GB oo keyd ah iyo 1 GB oo RAM ah, marka lagu daro dhammaan noocyada dareemayaasha, oo ay ku jiraan ECG si loo sameeyo barnaamijyada elektrokoardyo-ga.
Farqiga ugu weyn, marka lagu daro cabbirka shaashadda, waxaan ku arki doonnaa batteriga, sidan, qaabka ugu horreeya wuxuu leeyahay 247 mAh, halka nooca 45 mm uu joogi doono 340 mAh. Qiimaheeda? Waa inaan sugnaa ilaa 5 Ogosto si aan u ogaano waa imisa qiimaha Samsung Galaxy Watch 3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Shaandheeyey isku-xirka iyo qaababka Samsung Galaxy Watch 3
Safari Forever waa madal wanaagsan oo leh tifaftire heer leh oo ay kula raaxaystaan ​​asxaabta kale